KUBALULEKILE UKUBHEKISA KUDONALD TRUMP NJENGO 'MONGAMELI WANGAPHAMBILI' - UNYULO LUKA-2020 LUKAMONGAMELI
Ngokungafihlisiyo Ngaphantsi Komthi
Kutheni kubalulekile ukuBhekisa kuDonald J. Trump njengoMongameli wangaphambili
Owayesakuba nguMongameli uDonald J. Trump woyika ukubizwa nantoni na ngaphandle kuka-Mongameli we-45 wase-United States of America, kwaye kuyabonisa. Amagqwetha kaTrump, ngeeleta eziya kwiCongress, athetha nalowo wayesakuba nguMongameli njengo-Mongameli we-45 wase-United States. Balandela oko ngokusayina amagama abo ngaphezulu kwamaGqwetha kaMongameli we-45th uDonald J. Trump.
Mandy uyintombazana entle lyrics
Iqela lakhe lonyulo lwamva libhekisa kuye ngendlela efanayo kwimidlalo yeTV nakwizitetimenti ezisemthethweni. Ngoku, ngobugcisa, ungu-Mongameli wama-45. Kodwa ukwanguye yangaphambili UMongameli we-45, kunye nemiba yokubhalwa kwamagama.
Ukucinga ukuba le yimichiza engenantsingiselo evela kwi- yangaphambili UMongameli akalihoyi ixesha lakhe elidlulileyo lokuzama ukulawula ibali. Nokuba lulonyulo okanye ngubani owayenoxanduva lokuhlaselwa kwabanqolobi eKapitol, uTrump ebesoloko enesandla ekulawuleni into awayeyibona iyinyani. Ukwenza abo babemngqongile bathethe naye njengo-Mongameli we-45 wase-United States enye indlela encinci yokuba uTrump angavumi ukuvuma ukoyiswa-eyona nto ikhokelele kuhlaselo lweCapitol-ngaphandle kwenkqubo yedemokhrasi eyenziwa ngabantu nangenxa yabantu.
Sebenzisa eyangaphambili xa uthetha noDonald J. Trump yindlela yokuxelela umhlaba ukuba ulawulo lwakhe, nayo yonke imigaqo-nkqubo eza nayo, yenziwe kwaye iphelile. Oko kubalulekile kwabo kuye kwafuneka bahlupheke ngolawulo lwakhe-abo bahlekiswa, bavalelwa, okanye bavalelwa umlomo ngenxa yokuthetha nje ngokuchasene noluphi na uhlobo lwesini, ubuhlanga, okanye ulwimi olunamandla olwalusetyenziswa nguMongameli wangaphambili okanye ulawulo lwakhe.
Ukuqinisekisa ukusebenzisa eyangaphambili xa uthetha noDonald J. Trump kubalulekile kuba yindlela yokuxelela abalandeli bakhe kunye namaRiphabhlikhi ukuba iTrump ilahlekile. Inkqubo yedemokhrasi esemthethweni yenzekile, yafunyanwa ilungile, kwaye lixesha lokudlulela kulawulo lweBiden. Ukuba akunjalo, abalandeli bakhe baya kubambeka kumjikelo ongapheliyo apho bangazukukholelwa ukuba uTrump ulahlekile kuba le ndoda ayikayamkeli kulwimi ayisebenzisayo.
Amagama anamandla, kwaye uTrump uyakwazi oku. Kwaye uzama ukubambelela kuwo nawaphi na amandla kunye namandla afunyenwe kule minyaka imbalwa idlulileyo njengendlela yokubamba ngaphezulu. Ilungelo apho liyingozi kuba, ukuba akashiywanga engakhange aqwalaselwe, angaqhubeka nokuzama ukuguqula idemokhrasi yethu ngenxa yezidingo zakhe nezombutho wakhe. Kwaye sibonile ukuba kwenzeka ntoni kwimbali xa ii-narcissists ezinobuqhetseba okanye ubungangamsha zingangxengwanga kwaye zikhululwe.
I-United States yaseMelika ayiyidingi loo nto, ngakumbi kulowo wayesakuba nguMongameli njengoDonald J. Trump.
(umfanekiso: Win McNamee / Getty Izithombe)
amandla avusa ipowusta evuzayo
jonga uvavanyo lwakho lwelungelo elikhethekileyo
izidalwa eziluhlaza ezimhlophe ezibomvu eziluhlaza
tina fey umyeni kunye nabantwana
umsinga wamehlo amaninzi dnd
Igama elisebenzisa unobumba ngamnye